I-Saladi kubhontshisi kunye neebhunge: zokupheka kunye nezithombe. Ama-salads asele ayenzileyo ayamnandi kwaye alula.
Ukupheka kwee saladi ezinomsoco.
Kwimeko enkulu ekusebenziseni iintlobo ezithile zeemveliso, kodwa oku akuthethi ukuba ukutya kuya kubonakala. Kukho inani elikhulu leendlela zokupheka ezinokudambisa ukutya kule xesha. Ukongezelela, ezinye zazo zinomdla kakhulu kwaye azikho mnandi. Kule nqaku, siza kubelana nawe zokupheka ezimbini zokuqala zokufumana isaladi ephilileyo, mhlawumbi ungazange uyenze.
Umntu othanda ukupheka unokudala ummangaliso kuyo nayiphi na imveliso yemveliso. Siza kunika iirephefu ezingadingi ukulungiswa okukhethekileyo. Baya kupheka ngamnye umfazi wendlu.
Isaladi ye-Bean kunye neembotyi
Esi sisitya esinqabileyo esingasetyenziswa ngokupheleleyo inyama ngexesha lokuzila. Kulula kakhulu ukuyipheka.
Iibhontshisi ezibomvu kunye ezimhlophe ezingama-400 amagremu nganye
I-oregano eyomileyo kunye ne-basil
Pepper kunye netyuwa
Ukulungiselela le saladi kuyimfuneko ukuqala nge-refueling.
Thatha i-orange, ususe i-zest kuyo kwaye ufake ijusi.
Gweba kakhulu i-anyanisi kunye ne-clove enye yegalikhi.
Beka zonke ezi zithako kwi-blender, faka iipunipoyi ezine zeoli yeoli, i-oregano, i-basil, i-pepper encinci kunye netyuwa. Gweba imizuzu emibili de ifikeleleke ngokukhululeka.
Ngoku uye ngqo kum saladi. Kulula kakhulu, kufuneka udibanise ubhontshisi nge-anyanisi eluhlaza uze udibanise konke ngokugqoka. Iimbotyi zinyani kufuneka zilungiswe kwangaphambili. Sincoma ukusebenzisa ubhontshisi obomhlophe kunye nobomvu obomvu. Kwanele ukuthulula amanzi abilayo imizuzu emithathu, cima amanzi uze uyomise.
Iidrafti zesaladi kunye nesithombe
Isaladi ikulungele. Inomthamo omkhulu wezondlo kunye namavithamini. Ukongezelela, unomsoco, obaluleke kakhulu ukugcina amandla akhe.
I-Beetroot kunye nesaladi ye-mushroom
Isici esikhethekileyo sale saladi ibhontshi ebhakiweyo. Kukhanya kakhulu kwaye ngexesha elifanayo luncedo kakhulu, lingakhumbuza i-vinaigrette, kodwa nge-taste sweet-sour taste.
Iibhotela ezintathu ezincinane
Amagqabi amasha - 200 g
Ioli yohlaza yokugqoka
Enye ifuni ye-aple cider viniga
Masiqale ukulungiselela isaladi:
Okokuqala, kufuneka ubhake ii-beet. Ukwenza oku, ulungise i-oven ukuya kuma-degrees angama-160, uhlambulule iibhotile uze uwafake kwi-foil. Beka ehovini ngesigamu seyure. Ukuba i-beet inkulu kakhulu kuneyethu, kukufanelekile ukuyobhaka malunga neyure.
Nangona i-beet ibhaka, qaphela ezinye izithako. Geza unqume amakhowe. Unokwenza izicatshulwa okanye iinkcukacha, njengoko uthanda. Zisasaze kwiphepha lesibini lokubhaka uze uthumele kwi-oven ukuya kwi-beet imizuzu engama-20. Bamele bathuthumele.
Sika ii-anyanisi zibe ngamacangci.
I-beetroot ebhakiweyo kufuneka ikhuphe kwaye igalelwe.
Hlanganisa kwisitya esisodwa seoli yemifino kunye neviniga, ixesha kunye ne-pinch of sugar and powder. Gcobisa kakuhle kwaye wongeze lo mxube kwiibhotela ezicatshiwe.
Yongeza amakhowe kunye anyanisi, xuba.
Yishiye isaladi malunga nesiqingatha seyure. Ngoko kulungele ukuhamba kunye nokutyhila ngokucacileyo inkcazo yesithako ngasinye.
Nazi iiledi ezilula ezinomdla zingabonakalisa ukulungiswa kwetafile yakho yokutya. Uyavuma, awuzange wenze izitya ezinjalo. Ngoko lixesha lokuzama kwaye ulumangalise abathandekayo bakho ngento entsha.
Isaladi kunye neflett yenkukhu, iinanphaphu kunye negromegranate
Isaladi yepilisi ebusika Iminwe ikhuni, Kwi-apula, ngaphandle kobuncwane, ngaphandle kweetamatati. Iindlela zokupheka ezihamba phambili ngeyiteyibini kwi saladi yepilisi ebusika
Isaladi "Imifuno nge-walnuts". Iresiphi entsha yonyaka
Ukufunda indlela yokuchonga indawo ngokufanelekileyo